Nabii Keeyitaa - Giinii fi Red Buul Leeyipziig - BBC News Afaan Oromoo
Nabii Keeyitaa - Giinii fi Red Buul Leeyipziig
Goodayyaa suuraa Qarshii gadi aanaadhaan RB Salsibarg irraa kan bitame Keeyitaa amma taphataa qaala'aa Afriikaa ta'uuf jira
Nabii Keeyitaa bara dorgommii 2016/2017 yoo eegalu beekamtii kan hin qabne ta'us, yeroo xumuru garuu garee cimaa Bundasliigaa - filannoo hawaasaatiin taasifamu irratti sagalee hedduu taphattoota sarara gidduu hunda caalu argachuun maqaa isaa katabsiisuun
Reed Buul Leeyipzhiig bara darbe kilabii tasaa ta'uun yeroo jalqabaaf gara Bundasliigaa bara dhufanitti 2ffaa ta'uun xumuranii hirmaannaa Chaampiyoons Liigii argataniiru, taphataan isaanii sarara gidduu kun ammoo akka sad. 2ffaa kana argataniif hedduu isaan gargaare.
Taphataan qarshii gadi aanaadhaan kilaba obboleettii kan ta'e RB Salsibarg irraa bitame kun tapha jalqabaa Bundasliigaa irratti taasiseen, galchii lakkoofsisuuf daqiiqaa 5 qofa itti fudhate. Kunis daqiiqaa 89 irratti galchii Doortimandiin itti injifatan lakkoofsisuun innis kilabni isaas akka ija keessa galan isaan taasise.
Walumaa galatti, galchii 8 kan galche yoo ta'u (keessaa tokko galchii bareedaa bara kanaaf dorgomaa turte) akkasumas kubbaa 7 galchiif mijeessee kennee jira (kunis hedduminnaan 3ffaa dha) dandeettii ittisuu isaatiin kan dinqisiifamu taphataa kanaaf, kunneen waan gaggaarii lama dha.
Taphni bareedaa agarsiisu dhugaatti kan nama ajaa'ibu akkuma ta'ee jirutti.
Taphataa qarshii xiqqaan bitamee riikoordii Afriika cabsuuf jiru
Dirree guutuu taphachuuf dandeettii qabaachuu
Taphataan sarara giduu dirree guutuurratti taphatu kun akka taphataa lamaati jedhamee ibsamaa kan jiru yoo ta'u, taphataa leenjistoonni hedduun qabaachuuf hawwanidhas jedhama.
Tapha addaan kutuu irratti ogeessa kan ta'e, taphattoota bira darbuuf humna guddaa fi agartee gaari kan qabu Keeyitaan bara darbe taphataa Baayer Muuniik Ariyaan rooban caalaa kubbaa gangalchuu yookaan lakkoofsiseera, yookaan ammoo galchiif mijeessee kenneera.
Leenjisaan Leeyipziig Raalf Haasenhuutil taphataa kana ''baay'ee kan barbaachisu fi dandeettiinsaa adda kan ta'e'' jechuun ibsuun isaanii kanaaf ture.
'adda kan tahe'; geessituu: http://www.bundesliga.com
Taphataa beekamtii hin qabnerraa gara riikoordii Afriikaa cabsuutti
Dhalataan koonaakirii kun sochii agarsiiseen kan maalalan Liivarpuul, riikoordii Afriikaa cabsuun paawundii mil. 48'n 2018'tti mallatteesifachuuf waliigalteerra ga'anii jiru - Leeyipziig taphataan kun osoo qarshii jedhame kana dhiyeessuufii baatanii akka hin gurgurreen beeksisanii turan.
Keeyitaan galchii 2 biyya isaatiif lakkoofsisus, Giiniin gara Waancaa Adduunyaa Raashiyaa 2018'tti deemuu waan hin dandeenyeef, amma xiyyeeffannaan isaa guutuun kilaba isaa tajaajiluu dha.
Fakkeenyi isaa Yaayyaa Turee akka ta'e kan dubbatu taphataan kun, Badhaasa Taphataa Cimaa BBC bara kanaa injifachuun dulaaba isaarra kaawwachuun, seenaa lammiin Ayivooriikoost hojjate ni dabalaa laata?